Yunivarsitiin Wallaggaa akkuma amala isaa barattota Oromoo ari’uu eegalee jira. – Welcome to bilisummaa
Yunivarsitiin Wallaggaa akkuma amala isaa barattota Oromoo ari’uu eegalee jira.
Osoo barattoota Oromoo ar’uun qabsoo bilisummaa dhaamsee silaa baroota amma duraati milkaayan. Hin taatu. Pirazidantii yunivarsitii Wallaggaa Fiqaaduu Bayyaana seenaafi ummanni Oromoos isa gaafachuuf taa’a. guyyaan sunis fagoo miti!
Previous Home › Horn of Africa › Oromia › Ethiopia › Don’t kill us or don’t dispose us to killers, instead stand by us, the Oromo Don’t kill us or don’t dispose us to killers, instead stand by us, the Oromo
Next Hiriira Maaster Pilaaniif bahe falmuuf qonnaan bultoonnis itti dabalamaa jiru